(အင်္ဂလိပ်: Wild goat)
တောဆိတ် (အင်္ဂလိပ်: Wild goat) တို့သည် ဆိတ်နှင့် နွားများပါဝင်သည့် ‘ဗိုဗီဒီး (Bovidae)’ မျိုးရင်းဝင် နို့တိုက်သတ္တဝါ များဖြစ်ကြသည်။ ‌တောဆိတ်များ၌ သမင်မျိုးမှာကဲ့သို့ ခွာကွဲများနှင့် ဦးချိုများရှိသည်။ သို့‌သော် ‌တောဆိတ်၏ ဦးချိုသည် သမင်မျိုး၏ ဦးချိုများကဲ့သို့ ‌ခေါင်းပိတ်မဟုတ်ဘဲ ကျွဲ နွား၊ သိုးနှင့် ဆိတ်တို့၏ ဦးချိုကဲ့သို့ ‌ခေါင်းပွဖြစ်သည်။ ‌တောဆိတ်သည် စားမြုံ့ပြန်သည်။ သမင်မျိုးကဲ့သို့ ဦးချိုလည်းမလဲ‌ချေ။ ‌မွေးစက‌ ပေါက်လာ‌သော ဦးချိုသည် အသက်ထက်ဆုံး ကြီးရင့်၍တည်‌လေသည်။ အဖိုတွင်‌ရော အမတွင်ပါ ဦးချို‌ပေါက်သည်။ ‌တောဆိတ်၏ဦးချိုသည် သမင်မျိုး၏ဦးချိုကဲ့သို့ ခွလျက်လည်းမရှိ‌ချေ။ ‌ဖြောင့်၍ ချွန်လျက်‌သော် ၎င်း၊ ဝက်အူရစ်ကဲ့သို့‌သော်လည်းကောင်း၊ ‌နောက်ဘက်သို့ ‌ကောက်လျက် ‌သော်လည်းကောင်း၊ ပန်းဆွဲပန်း‌တောင်ကဲ့သို့ အထက်သို့ညီညာစွာတက်၍ ‌ကောက်လျက်‌သော်လည်းကောင်း ရှိတတ်သည်။ များစွာ‌သော ‌တောဆိတ်၏ ဦးချိုတွင် ကွင်းပုံများရှိတတ်သည်။
ကမ္ဘာ‌ဟောင်းတွင် ‌တောဆိတ်အမျိုးကွဲ‌ပေါင်း ၁၀⁠၀ ‌ကျော်မျှ ရှိသည်။ ထိုအနက် အနည်းဆုံး အမျိုး‌ပေါင်း ၉၀ သည် အာဖရိကတိုက်တွင် မူရင်း‌ဒေသအဖြစ် ‌နေထိုင်ကြသည်။ ထို‌တောဆိတ်မျိုး အားလုံးလိုလိုသည် လွင်ပြင်များတွင်‌ နေကြသည်။ ‌တောဆိတ်တို့သည် ခြင်္သေ့၊ ကျားသစ်နှင့် ‌တောလိုက်ခွေးများလိုက်လျှင် အလွန်လျင်မြန်စွာ ‌ပြေးလွှားနိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လည်း ဦးချိုမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမျှ မရှိ‌ချေ။ လျင်မြန်စွာ ‌ပြေးနိုင်‌သော ‌ကြောင့်သာလျှင် သားရဲတို့‌ဘေးမှ လွတ်‌မြောက်နိုင် ကြ‌ပေသည်။
↑ "Capra aegagrus" (2020). IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောဆိတ်&oldid=716517" မှ ရယူရန်